Kaalintee ayuu Raphael Varane kaga jiraa xiddigaha qiimaha ugu badan kaga tagay Real Madrid? – Gool FM
(Madrid) 28 Luulyo 2021. Kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Manchester United ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay inay ku heshiiyeen iibka Raphael Varane oo difaaca uga ciyaarayay Los Blancos.
Varane ayaa 50 milyan oo euro ugu wareegay Old Trafford waxaana uu sidaas booska afaraad kaga soo galay xiddigaha qiimaha ugu sarreeya kaga dhaqaaqay Madrid.
Xiddiga qiimaha ugu sarreeya kaga tagay Real Madrid kaga tagay waa Cristiano Ronaldo kaasoo xagaagii 2018 ugu biiray Juventus lacag gaareysa 105 milyan oo euro, waxaana ku xiga Alvaro Morata oo Chelsea ku aaday 80 milyan oo euro xagaagii 2017, halka laacibka saddexaadna uu yahay Angel Di Maria oo 2014 ugu wareegay Man United qiimo dhan 75 milyan oo euro.
28-sano jirka Faransiiska ah ayaana sidaas booska afaraad ku heysta isagoo isla Red Devils ugu biiray 50 milyan oo euro, isagoo soo gabo-gabeeyay 10 sano oo uu ka tirsanaa Real Madrid taasoo isagoo 18-sano jir ah kula soo wareegtay 10 milyan oo euro.